ရာထူးအကြီးဆုံးကဗျာဆရာ | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ငှက်ငယ်ပမာ ငါလျှင်လှည့်ပတ်
D.G.E. Hall Scholarship Deadline: 31 January 2012 »
Illustration by Aung Soe
မြန်မာရိုးရာတေးများ မြန်မာဆိုရိုးစကားစသည်တို့ကို အောက်စဖို့ဒ် စင်္ကာပူတို့မှ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော စာရေးဆရာမောင်မြင့်သိန်းရှိသေးလျှင် ၁၁၁ နှစ်ပြည့်ခဲ့လေပီ။
စာပေနှင့် မနုဿဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာထင်အောင်နှင့် မြန်မာ အင်္ဂလိပ်စာပေဌာနများက မူ ညီအမများ၏အကိုလေး ဦးမြင့်သိန်း (၁၉၀၀-၁၉၉၄)မှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်
ATM, OBE နှင့် ဒိန်းမတ်အစိုးရပေးသော ဘွဲ့များ၊ မြန်မာအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် အမြင့်ဆုံး အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ခံ နောက်ဆုံးလွှတ်တော်ချုပ်
တရားဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်သည်။ ကိုမင်တန်အရေး ကုလသမဂ္ဂတွင်အရေးဆိုခဲ့သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သူ့ကိုပိုမှတ်မိကြမည်။ သူ့နောက် ကိန်းဘရစ်ခ်ျမှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ယူသော ရှမ်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စဝ်ခွန်ချိုနှင့်ရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြု၍ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် ၅ နှစ်မျှအထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထောင်ကျစဉ် ငယ်ပေါင်းဇနီးသည် ဝတ်လုံဒေါ်ဖွားမှီမမာ၍ ဆုံးသည်ထိ ထွက်ပြုစုခွင့်ရလိုက်သည်။ ထောင်ထဲတွင် မှတ်မိသလောက်ပြန်ဆိုထားသောကျေးလက်ကဗျာများကို ဘိလပ်တွင်ရိုက်နှိပ်သည်။ လက်မွန်မဆွ ၁၉၅၀ကျော်ထဲက တရားဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း၏ကဗျာများကို ဒေါက်တာမောင်မောင်ထုတ်ဝေသော ဂါးဒီးယန်းအင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းတွင် တွေ့နေရသည်။
Libellous Lyrics by M.M.T
I took to strenuous exercise
To level down my bulging waist,
I hopped and stepped and also jumped
And weary miles I also paced.
It only made me hungry, tired,
And I ate more and lolled in bed.
My bulging waist, it bulged on still
And gained I much in weight instead.
I sought advice from certain friends
Who kindly hadahorse produced,
I have been riding hard since then,
But ’tis the horse that gets reduced.
ယခုလာမည့်ကြားရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရွေးခံရပီး အစိုးရရာထူးများရလာပါက မကြာခင်က သွေးလက်စ ကဗျာလက်ကိုမပျက်စေဘို့တောင်းပန်ပါသည်။ သူ့ရဲဘော်ဟောင်း
ပန်းချီဆရာ စာရေးဆရာ မသိင်္ဂီလို နိုင်ငံတကာနှင့်အထိအစပ်များသူကိုလည်း ယဉ်ကျေးမှုလို ဝန်ကြီးတနေရာဆွဲခန့်သင့်ပါသည်။ အနုကဗျာသမားများကို ရာထူးကြီးများ ပေးခြင်းမှာ ပြည့်ကျက်သရေ ပြည်ကျိုးရှိဖို့ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးခန့်ခဲ့သော ကဗျာဆရာဝန်ကြီးများမှာ ထီလာစစ်သူနှင့် ကေတုမတီကြည်အောင်တို့ဖြစ်သည်။
2 Responses to “ရာထူးအကြီးဆုံးကဗျာဆရာ”
1 Myint Zan on January 10, 2012 said:
Dear Bo Bo Thanks for your article. Former Chief Justice (and the last Chief Justice under the defunct 1947 Constitution) U Myint Thein (MMT) was born on 22 February 1900 and died on3October 1994. He was appointed as Chief Justice on 17 July 1957 and General Ne Win, Chairman of the Revolutionary Council in his Order dated 30 March 1962 ‘terminated with effect from noon, 31 March 1962’ ( I read that in Ludu Daily news item of 31 March 1962!). He was arrested on2March 1962 and was released on 28 February 1968, so the period he spent in detention was not ‘nearly five years’ as you have written but almost six years. Among the top leaders overthrown and put into detention by General Ne Win he spent the longest time. U Nu was released on 27 October 1966, the then President Mahn Win Maung was released in October 1967 and U Myint Thein was the last of the top leaders to be released. He had at least three collection of poems (1) Burmese Folk Songs (published in Burma also) (2) When At Nights I Strive to Sleep (first published in UK around 1970) (3) Burmese Proverbs Explained (published in UK around 1984). Do you know when the photo together with the late Daw Khin Kyi and Daw Aung San Suu Kyi was taken? Who was the other person in the photo.
2 bobolansin on January 10, 2012 said:
Thanks Uncle. So he might get the longest prison term after San leaders like U Tun Myint (10 years). Another man in the photo was Paw Oo Thet, taken in 1970s?